ARK: velona tafavoaka nandalo famerenana: vonona amin'ny finday? | Androidsis
Ora vitsy lasa izay dia mampahafantatra anao izahay fa efa manana ny fisintomana azonao atao de ARK: Survival Evolved, ny lalao velona misy amin'ny PC izay mametraka anao alohan'ny nosy, ny tananao ary dinôzôro marobe izay tsy maintsy iatrehanao. Saingy, tokoa, ny seranana natao ho an'ny finday, vita tsara ve izany mba hahafahantsika mankafy ilay lalao finday izay ataon'ny PUBG Mobile tsara?
Ary ny marina dia, na dia ataovy lava be ny nifintsikaRehefa misy lalao 3D toy ny ARK: Survival Evolved entina amin'ny finday dia tsy maintsy atao amina andiana toerana io. Ny trano fonenana toy ny an-tsakany sy an-davany dia azo ampiasaina amin'ny finday marobe ary tsy manaparitaka ara-bakiteny ny bateria noho ny fampiasana tafahoatra ny loharano izay ataony. Moa ve ny ARK: Survival Evolved?
1 Ny fahasahiranana mitondra fahombiazana amin'ny PC amin'ny finday
2 Ny fahavelomana amin'ny ambaratonga sary lehibe
3 Maherin'ny 80 ny karazana dinôzôra ao amin'ny ARK: mivelona amin'ny fahavelomana
4 Inona no mety nisy nefa tsy izy
Ny fahasahiranana mitondra fahombiazana amin'ny PC amin'ny finday
PUBGMobile, miaraka amin'ireo fanavaozana ireoNasehony fa hainy tsara ny manao zavatra. Ary tsy vitan'ny manampy atiny fotsiny, fa efa fantany koa ny fomba fandefasana kinova vaovao izay dia nanatsara ny sary mba hahazoana ny ranom-boankazo rehetra ho an'ireo CPUs, GPUs ary fahatsiarovana RAM an'ny finday ireo. Io no ohatra tokony harahina ankehitriny.
Ary eto no misy mifanome amin'ny ARK isika: Survival Evolved, rehefa manamarina fa, na dia manana sary mikarakara tsara aza izy hanehoana ny mety ho ekipanay amin'ny namana, ny fampisehoana dia mamela zavatra irina, ary ny lag dia hita amin'ny faritra maro amin'ny traikefa nomen'ity lohateny ity, izay misy ny dinôzôro ny mahery fo.
Fiara Survival nivoatra afaka mahavariana noho ny fahafaha-miaina maharitra amin'ny alàlan'ny fanapahana hazo, ny fitadiavana vato ary ny fitoerany maro be eo alohanay "fanaovana asa-tanana". Ary manana dinôzôro izy, azo antoka fa izany dia iray amin'ireo sandany nanampy, na dia sandry sy tongotra aza no vidiny amintsika na ny batterie an'ny terminal-ntsika.
Ny fahavelomana amin'ny ambaratonga sary lehibe
Raha misy afaka manadino ny tsy fisian'ny fampisehoana ary manana finday avo lenta eny an-tànany izy, angamba mety ho hita amin'ny nosy iray izay hahitantsika ireo karazana biby mandady, zavamananaina ary ireo loharano rehetra ilaintsika hanohizana ny fahavelomantsika. ARK: Survival Evolved dia lalao iray manokana ary izany dia ampahany amin'ny "realisme" ao anaty sary izay tsy misy lalao mitovy amin'izany amin'ny sasany amin'ireo foto-keviny. manao ahoana ny minecraft.
Ary tsy tian'izy ireo ny hiala amin'ny lalao izay rehetra nahatonga an'ity lalao video ity ho malaza amin'ny sehatra toa an'i Steam. Izany hoe, manana karazana dinosauro 80 mahery isika, afaka izany milalao miaraka amina mpilalao marobe amin'ny lohateny karazana Jurassic Park ary mahita tontolo iray manontolo hita maso izay hahatonga antsika tsy hitaintaina vetivety; indrindra rehefa miseho ireo algorithoc goavambe ireo.
Maherin'ny 80 ny karazana dinôzôra ao amin'ny ARK: mivelona amin'ny fahavelomana
Ary eo no misambotra antsika ny ARK: Survival Evolved, a Tontolo iainana «Jurassic» izay tsy maintsy hahavelomantsika, mamorona fitaovam-piadiana, mitafy ny akanjonay namboarina ary mitaingina na dia ny firenentsika manokana aza. Mba hanamorana ny zava-drehetra, ARK: Survival Evolved dia ahafahanao mandray anjara amin'ny rafitry ny foko izay mandrisika ny fiaraha-miasa mba ho mora zakaina ny fahavelomana ary tsy hiafara amin'ny valan'ny dinôzôro goavambe izahay.
Tsy misy koa ny ARK: Fivoarana velona tsy hita a modely famandrihana mamela anao hanaisotra ny doka rehetra, manome bonus traikefa indroa ary manolotra fidirana amin'ireo mpizara tianao mba hahafahantsika miditra milalao foana. Na dia azontsika atao aza ny mieritreritra fa ho sarotra amin'ny mpilalao maro ny mandalo io maodely io amin'ny toetran'ny ARK ankehitriny: Survival Evolved, satria tsy tsara tarehy izany rehetra izany.
Inona no mety nisy nefa tsy izy
Amin'ny lafiny an-tsary dia haitraitra be ity, fa ho takalon'ny tsy fahombiazan'ny fampisehoana sy ny lag; na ny faritra may aza dia miseho eo amin'ny écran noho ny jiro. Toy izany koa ny vokam-peo sasany toy ny rehefa mamakivaky ny rano ianao. Andao lazaina fa ny zavatra tsikaritranao amin'ny ARK: Survival Evolved dia ny tsy nanatsarana izany ho an'ny finday, midika izany fa handany ny bateria findainao be loatra. Ary ity, rehefa ela ny ela, dia kilemaina handinihana ka hahafahan'ny mpilalao rehetra mankafy mankafy azy io hatrany.
Manantena aho fa amin'ny fanavaozana vitsivitsy dia hihatsara ny zavatra, satria ARK: Ny Survival Evolved no ohatra mifanohitra amin'izao fotoana izao mankany amin'ny PUBG Mobile: ahoana no tsy hanaovana lalao ho an'ny finday iray avy amin'ny PC. Azonao atao ny misintona azy maimaim-poana avy amin'ny Play Store, ka ndao hiaina!
Fiara Survival nivoatra
Ny tsara indrindra amin'ny tsimbadika PC anao dia eto
Tsy misy fahombiazana sy fanatsarana
Indraindray ny feo dia tsy vita tsara
Interface misy lag
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » ARK: Famerenana amin'ny laoniny ny fitsangatsanganana: fivoarana sa famerenana amin'ny laoniny?
Carlos Pacheco dia hoy izy:
Ny fahasamihafana lehibe iray hitako teo amin'ny PC sy ny kinova finday dia ny fandaniam-potoana handinihana fitaovana. Mandritra ny PC amin'ny fiandohan'ny Dodo tokana dia afaka mahazo fitaovana ilaina hanaovana ny kitaponao fatoriana ianao, avy amin'ny hazo ny kitay ho an'ny trano na ny mololo ho an'ny fitafianao, amin'ny finday dia mila mandany ny ankamaroan'ny fotoana ianao mitady loharano fa vitsy dia vitsy izao no manome anao. Mila manapaka ara-bakiteny toy ny hazo 30 aho hamoronana trano 4 × 4 hazo ary mitaky fotoana bebe kokoa amin'ny fambolena loharanon-karena noho ny fiainana ilay lalao.
Valiny tamin'i Carlos Pacheco